Ao anatin'ny vanim-potoana 4 ao amin'ny "Veronica Mars" (Article 2 ao amin'ny 2) - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Featured » Ao anatin'ny vanim-potoana 4 ao amin'ny "Veronica Mars" (Article 2 an'ny 2)
Ao anatin'ny vanim-potoana 4 ao amin'ny "Veronica Mars" (Article 2 an'ny 2)
Veronica Mars ny cinematographer Giovani Lampassi (afovoany, satroka manga) miaraka amin'ireo ekipany amin'ny seta. (© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. voatahiry ny zo rehetra.)
Rehefa Veronica Mars voalohany natao tany UPN tamin'ny volana septambra 2004, ny andiany dia manana endrika tokana sy tokana manokana izay mampiavaka azy amin'ny fahitalavitra hafa tamin'ny vanim-potoana. Amin'izao toe-java-misy ankehitriny izao, ny loko voalohany dia mibahana, miaraka amin'ny endrika miloko mena, ny yellow, ny maitso, ny blues ary ny voasary. (Ny varavarankely rehetra tao amin'ny biraon'ny Investigations Mars dia toa vita amin'ny fitaratra misy masirasira.) Ny kapila tampoka, miaraka amin'ny fanamafisana azy amin'ny zoro ambany dia natsipy manga mainty. Ity fijery ity dia nitohy tamin'ny vanim-potoana voalohan'ny andiany voalohany. (Ny andiany fahatelo tamin'ny andiany dia nalefa tao amin'ny CW, izay nisolo ny UPN sy WB taorian'ny fifangaroan'ny tambajotra roa miaraka amin'ny CBS.)
Saingy rehefa nipoitra indray ireo mpilalao tao amin'ny 2014 Veronica Mars sarimihetsika, narahina fijery maivana kokoa, kely kokoa noho izany. Ny fampiasana loko tsy nahy dia tsy nampoizina tamin'ny rindrina iray hafa. (Tsy misy varavarankely fitaratra madio intsony ao amin'ny Mars Investigations.) Ity fomba ara-boajanahary ara-boajanahary ity dia mitohy amin'ny vanim-potoana fahenina tamin'ny vanim-potoana fahaefatra izay nanomboka tao Hulu tamin'ny volana lasa, niaraka tamin'i Giovani Lampassi naka ny vovoka ho Talen'ny Fizarana Fizarana vaovao. Tsara i Lampassi mba hiresaka amiko momba ny fandraisany anjara amin'ny fampisehoana ary koa ny fomba sy ny anton'ny fomba fijerin'ilay andiany ankehitriny.
"Nanomboka niasa tamin'ny sehatry ny matihanina 1994 tany Seattle aho momba ny sarimihetsika sy tetikasa kely kokoa tao amin'ny departemantan'ny jiro napetraka ary niasa mba hiasa ho lehiben'ny teknisiana jiro aho," hoy i Lampassi. “Nifindra tany aho Los Angeles ary, rehefa avy niasa tamin'ny horonantsary maro misy filam-bola natao niaraka tamin'ny sinema mpanao sary toa an'i John Alonzo (ASC), Peter Levy (ASC, ACS), Geary McLeod (ASC), ary Krishna Rao, nanomboka nitifitra tetikasa kely kokoa aho mandra-panolorana ahy. Party Down, izay novokarin'i Rob Thomas. Ity no fampisehoana izay nametraka ahy ho cinematographer amin'ny fotoana iray manontolo. Hatramin'ny fampisehoana izany dia nandeha nitifitra fampisehoana fahitalavitra isan-karazany aho, toy ny Mandritra ny alina manontolo ary Brooklyn Nine-Nine. Rehefa avy Veronica Mars nofonosina, nasaina aho Zava-dehibe maromaro mba hitifitra ho an'ny ABC, ary any Vancouver aho izao miasa amin'ny vanim-potoana roa amin'izany fampisehoana izany.
“Ny fanamby lehibe indrindra Veronica Mars dia ny fanajana sy hitandremany ampy ireo andiany tany am-boalohany amin'ny endrika sy ny fomba, fa koa havaozina izany ary aseho fa efa lehibe i Veronica. Izahay koa dia nitifitra isa be dia be, hany ka afaka mifindra haingana, fa mitazona endrika mahazatra ihany koa, dia zava-dehibe. Nisy ihany koa ny fantsona sasany izay niniana namboarina kely kokoa noho ny seatra napetraka hanery ny toetran'i Kristen ho amin'ny rivo-piainana claustrophobic. Ireo fanamby ireo dia tena sarotra tokoa satria ny jiro dia akaiky ny mpisehatra akaiky azy. Ankoatr'izay, satria nidina haingana tamin'ny famokarana izahay ary voafetra teo amin'ny sehatra sehatra izahay, ny fitifirana jiro dia nitazona teo an-tampon'ireo nifanatrika tamin'ny mifanohitra.
Nanontany an'i Lampassi aho hoe fa maninona Veronica Mars nandao ny fomba nanilihana azy taloha sy ny fomba nahatrany ny maizina kokoa sy ny fomba fijery ambany. "Ny antony lehibe amin'ny fanovana dia ny, raha toa ny fahitana ireo vanim-potoana telo voalohany dia miharihary Veronica Mars, daty tamin'ny vanim-potoana manokana ary nifanaraka tamin'ny fiainan'i Veronica, "hoy izy nanazava. “Izany koa dia manana endrika tokony hifanaraka amin'ny tontolo CW. Tianay ho fantatry ny olona raha mijery ny dikan-dahatsoratra ankehitriny izy ireo dia mahita veronica efa lehibe. Tianay ny hanafoanana ny felaka loko ary hamorona fomba fanavaozana. Nahomby izany tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpamorona mpamorona Craig Stearns mba hahitana felana loko izay tsy dia lavitra loatra amin'ny loko saturated. Avy eo dia nanary ny vokatra farany izahay tamin'ny fametahana loko amin'ny toerana ilainay.
"Nampiasa ny Panavision DXL2 vaovao misy ny fitaratra Panavision Vintage Prime izahay ary nampiasa Panavision zooms nitazona azy hifanandrify amin'ny fitaratra varotra. Izaho no taloha Hollywood Sivika mainty Black miaraka amin'ny Softs mahazatra mba hanamafisana ny fahatoniana. Ny jiro dia fifangaroan'ny vatosoa tungsten mahazatra miaraka amin'ny Arri S-60's sy ny fanamboarana jiro LED an'ny alàlan'ny jiro fialamboly Custom. Ny jiro mahazatra CEL vita amin'ny jiro vaovao dia ahafahantsika mametraka jiro izay tsy afaka nivezivezy ny jiro mahazatra ary navela handanjalanja kokoa amin'ny loko, ny hamafiny ary ny fahatsapana malefaka. Izy ireo dia vokatra tena mahatalanjona satria maivana be izy ireo ary manana famoahana goavana. Ilay lehiben'ny teknisianina jeneraly, Larry Sushinski dia afaka naka ireto jiro vaovao ireto ary koa ny jiro mahazatra anay ary nitazona azy ireo tamin'ny alàlan'ny birao jiro izahay; tena nataony tsotra sy haingana io.
“Nandefa loko niaraka tamin'i Gareth Cook tao amin'ny The Foundation izahay. Talohan'ny nidiranay tao amin'ny famokarana, dia nivory momba ilay fanavaozana izahay sy Gareth Veronica Mars jereo. Gareth dia nanao ny loko loko tamin'ny tany am-boalohany Veronica Mars, ary koa ny sarimihetsika fampirantiana, ka izy dia fananana lehibe amin'ny famolavolana ny fomba handraisantsika ny tany am-boalohany fa mbola manavao ny fijery. Matetika, rehefa vita ny fanapahana dia hanao pasipa voalohany i Gareth amin'ny fizaram-potoana, ary handeha aho hiara-mipetraka aminy hiatrika fanitsiana farany. Izahay dia mampiasa windows windows ary miara-miasa amin'ny loko sy ny mifanohitra farany. Niasa be niaraka taminy izy ary nanosika ny fijery. ”
Tamin'ny ankamaroan'ny Veronica Mars dia nalaina amina toerana tena izy, nanontany tena aho ny amin'ny fahasamihafan'ny mitaky toerana fitadiavana toerana rehefa miasa amin'ny fakana feo. "Samy manana ny tombany sy ny filàny izy ireo," hoy i Lampassi tamiko. “Tiako ny mitifitra eny an-toerana satria, ho ahy, ny tontolo iainana no manambara ny fandrehitra ny sehatra. Manaraka ny tontolo iainana ny fomba, ary rehefa azonao atao ny misambotra ny toeran'ny tetikasa mifanaraka amin'ny alàlan'ny toerana avelan'ny toerana ihany, dia tanteranao ilay asa. Izay ny asan'ny cinematographer. Amin'ny resaka feo iray, mahafinaritra izany satria afaka miteny ianao hoe: 'Tiako ny 8 - 20ks ho an'ny varavarankely ary omenao banga feno aho hampihenana ny tsy fitoviana,' nefa ianao manana fifehezana farany amin'ny fitenenana feo. Any amin'ny toerana misy anao dia mety hitifitra izay tsy hamelan'ny tanàna ny jiro handrehitra jiro amin'ny varavarankely, na mila mandehana hitifitra alohan'ny hilentehan'ny masoandro ianao, na raha ny marina. nanao midina ary mila manao toy ny andro ianao, ka voatery hanaisotra ianao - ary izany no tiako, famahana ny olana. Indray ny sehatra iray miavaka: rehefa niditra tao amin'ny Lapan'ny tanàna i Logan ary nahita an'i Parker, dia voatifitra tanteraka izany tamin'ny alina ary heveriko fa nanintona azy tsara izahay. Amin'ny faran'ny andro, mbola mila mahita ny fomba fijerinao ianao, ka afaka mamantatra izany rehefa diso ny zava-drehetra. ”
Tahaka ny talen'ny Scott Winant, izay nanadihady momba ny lahatsoratra voalohany ato amin'ity andian-dahatsoratra ity, nahita i fiasa miaraka amin'i Lampassi Veronica Mars cast sy crew ho traikefa tsara. “Ny cast andrian'ny Veronica Mars nihaona tamim-pandresena haingana tokoa - tamin'ny fampisehoana sasany dia maharitra mandritra ny vanim-potoana iray izay hahatongavan'ny tsirairay miasa tsara - saingy tsapako fa niara-nientana izahay rehetra mba hahatratrarana ny tanjona isan'andro amin'ny faran'ny andiany voalohany. Hanomboka hamaritako izay zavatra ilainay na ilainay ary ilay olona hiresahako hamita ny fehezanteny ananako amin'izay tena halehako.
“Niara-niasa tamin'ny castera ny traikefa manokana. Nanomboka niantso an'i Kristen ho 'unicorn' izahay satria nahalala sy mahay zavatra be dia be izy. Sarotra ny manazava azy, fa izy vao nahafantatra ny antsonay kely rehetra, ary tsy vitan'ny hoe fantatsika izay ezahintsika hotanterahina, dia niasa izy mba hanampy antsika hitranga. Raha tsy noho ny fahaizany haitao ara-teknika amin'ny hetsika ao ambadik'io sehatra io, tsy azoko antoka hoe mety ho afaka misintona ny zavatra ilaina izahay.
"Izaho dia fitiavana tafiditra amin'ny vanim-potoana hafa amin'ny Veronica Mars; betsaka ny zavatra tiako maria amin'ny fomba hafa. Heveriko fa izaho irery no mpitsikera ratsy indrindra, fa raha nanam-potoana hisaintsainana ilay fampisehoana aho dia fantatro izao fa izao no tiako kasao ho an'ny manaraka. Kristen, Enrico, ary ilay mpiaramanidina iray dia vondrona mahafinaritra be hiara-miasa sy mijery azy ireo manao dia voninahitra. ”
fampitana injeniera fampitana Engineering CBS HOAN'NY FOR-A, rafitra vitsivitsy, Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Hulu Kristen Bell Rob Thomas Spears & Arrows Ny CW Ny WB TV Technology Ultra HD Forum UPN Variant Systems Veronica Mars Video injeniera	2019-08-19
Previous: Ny tombony azo amin'ny fampiasana tambajotra haino aman-jery manerantany ho an'ny fanatanjahantena mivantana manara-penitra